Umthelela weCyclone Idai okhethweni lwaseMalawi | Bayede News
Home/ Imibono/ Ezamazwe Ngamazwe/Umthelela weCyclone Idai okhethweni lwaseMalawi
Umthelela weCyclone Idai okhethweni lwaseMalawi
ISISHINGISHANE u-Idai sihlasele ngesikhathi esibucayi eMalawi njengoba leli lizwe lilungiselela ukuya okhethweni lukazwelonke zingama-21 kuNhlaba. Kubikwa ukuthi izifunda ezithinteke kakhulu kulokhu kugasela kuka-Idai iChikwawa neNsanje ezisezansi neMalawi. Ngokwezibalo zenhlangano yamazwe i-United Nations (UN) ukuhlasela kwesishingishane u-Idai kuleli lizwe kushiye abangama-60 bedindilizile, bengama-672 abalimele, asebesabalele kwezinye izindawo ngokusabela impinda bona bayizi-19 328, kanti isibalo esiqoqiwe sabo bonke abathole amachaphazelo abangama-868 895.
Lesi sishingishane sihlasela nje ongaphansi nongaphezulu phakathi kweqembu elibusayo iDemocratic Progressive Party (DPP) eliholwa uSolwazi u-Arthur Peter Mutharika neqembu iMalawi Congress Party (MCP) eliholwa uSolwazi uLazarus Chakwera njengoba kungasensuku zatshwala kufike usuku lokhetho lukazwelonke. Nakuba ekhona amanye amaqembu asewungenele lo mncintiswano wokhetho kodwa kubonakala kuphakathi kweqembu elibusayo iDPP neMCP ukudla umhlanganiso njengoba iMCP isibophe amaxhama okusebenzisana namanye amaqembu ukuze kuqunjwe phansi umbuso weDPP.
Zili-15 kuNdasa owayenguMengameli kuleli lizwe phakathi kukaMbasa kowezi-2012 kuya kuNhlaba kowezi-2014 uNkk uJoyce Hilda Banda wamemezela ukuhoxisa imizamo yakhe yokukhuza ibuya kwesobumengameli njengoba iqembu lakhe iPeople’s Party (PP) seliseka iMCP. Kubonakala lokhu kusebenzisana kwalawa maqembu kuwubeka engcupheni umbuso weDPP njengoba neqembu lowayenguSekela Mengameli ngesikhathi sombuso kaNkk uBanda uMnu uKhumbo Hasting Kachalin iFreedom Party (FP) zintathu kuNhlolanja lamemezela ukuhoxa ngenhloso yokweseka iMCP. Amavoti ayisigidi atholwa iPP okhethweni lwangowezi-2014 angase awelele kuMCP okuyinto engaliqinisa idolo leli qembu.
Kuhlasela isishingishane u-Idai nje zili-14 kuNdasa uNgqongqoshe Wezezimali kuleli lizwe uMnu uGoodall Gondwe wathula isabelomali esehlile kunesanyakenye ngenxa yokwehluleka ukuqoqa intela eyanele. Ngaphezu kokuthula isabelomali esehlile uGondwe waphinde wamemezela ukuhoxisa uxhaxha lwezinhlelo zikaHulumeni isizathu kungukwentuleka kwemali.
NgoLwesibili uNgqongqoshe Wezolimo uMnu uJoseph Mwanamvekha uhlawumbisele ukuthi ungama-20% umkhiqizo wempuphu olahlekile ngenxa yesishingishane u-Idai. Ngalokhu ubeke wathi; “Izikhukhula zidlule nomhlaba wokutshala ummbila ongamahektha ayizi-71 111, okusho ukuthi singabala amasaka ommbila ayizi-639 999”.
NgoMsombuluko iphephandaba iThe Malawi Post liveze ukuthi leli lizwe liyehluleka ukusebenzisa ngendlela imali evela kuGlobal Climate Fund (GCF) ehlose ukusiza amazwe ukuthi amelane nokuguquguquka kwesimo sezulu ngokwezolimo.
Kanti zingama-27 kuNdasa okhulumela inhlangano iWorld Food Progammme (WFP) uMnu uHerve Verhoosel waveza ukuthi isishingishane u-Idai udale umonakalo omkhulu kwezolimo kangangokuthi le mboni idinga ukwelekelelwa ngezigidi ezili-$15.4 ezinyangeni ezimbili ezizayo ukuze izokwazi ukuphakela abantu ngendlela.
Inhlangano iWorld Health Organization (WHO) isixwayise iMalawi neZimbabwe ngomthelela wesifo sohudo iKholera esesihlasele iMozambique ngenxa yesishingishane u-Idai. Le nhlangano ixwayisa lawa mazwe ukuthi angahle agilwe yisifo esifanayo nomkhaya iMozambique njengoba womathathu lawa mazwe aba yizisulu zika-Idai owahlasela zili-14 kuNdasa. EMozambique sekubikwe ukuthi usekhona osefile ngenxa yeKholera okungakho iWHO isixwayise namanye amazwe athinteka kusishingishane ukuthi aqaphele.
Ukuhlasela kwesishingishane eMalawi kuvele kufice kubhebhetheka isifo sezinkomo nezimvu iFoot and Mouth Disease esesigulise inqwaba yabantu kwisifunda iNzima. Isekela mqondisi lomnyango wezolimo, ukuchelela kanye nokuphela kokudla uDkt uGilson Njunga ngomsombuluko waveza ukuthi umnyango wakhe usukhiphe imali engamakwacha aseMalawi ayizigidi ezingama-400.
Konke lokhu ukwenzeka kuleli lizwe kufikisa umbuzo wokuthi ngabe ukugasela kwesishingishane u-Idai akuzoba namthelela yini osukwini lokhetho uma kubhekwa nezinkinga ebezivele zikhona ngaphambi kwakho lokhu kugasela.
Ubukeka esazoyidonsa imikhala uPutin